Liverpool Oo Kaalinta Labaad Ee Premier League Kala Baxday Chelsea Kaddib Guul Raaxo Leh Oo Ay Ka Gaadheen Brentford - GOOL24.NET
Liverpool Oo Kaalinta Labaad Ee Premier League Kala Baxday Chelsea Kaddib Guul Raaxo Leh Oo Ay Ka Gaadheen Brentford
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa soo gashay kaalinta labaad ee horyaalka Premier League, isla markaana soo yaraystay dhibcaha ay hoggaanka ku hayso Manchester City kaddib guul raaxo leh oo ay ka gaadheen kooxda heerka labaad ka timid ee Brentford.
Liverpool ayaa ka faa’iidaystay fursado ay iska lumisay Chelsea, waxaanay kala baxday booska kaalinta labaad, halka hoggaanka Man City na ay kusooceliyeen 11 dhibcood.
Saddex gool oo ay u kala dhaliyeen Fabinho, Oxlade-Chamberlain iyo Minamino ayaa Liverpool siiyey saddex dhibcood oo ay aad ugu baahnaayeen, xilli ay ka maqan yihiin xiddigaha Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Naby Keita oo ka qayb-gelaya tartanka qaramada Afrika.
Fabinho iyo Trent Alexander-Arnold ayaa 15kii daqiiqadood ee ugu horreeyey ciyaarta waxay u dhowaadeen inay shabaqa soo taabtaan, ka hor intii aanu Van Dijk khasaarinin kubbad uu ka helay xerada ganaaxa Brentford oo uu ku laaday lugta bidix, taas oo uu goolhaye Alvaro Fernandez lugta kusoo qabtay iyadoo goolka sii gelaysa.
Dhamaadka qaybta hore oo ay hal daqiiqo ka hadhsan tahay ayay Liverpool la timid goolka koowaad oo uu u saxeexay xiddiga reer Brazil ee Fabinho, kaas oo madax awood badan ku qabtay kubbad uu dhinaca ka soo qaaday Alexander-Arnold.
Liverpool oo inta badan kubadda maamulaysay ayaa u qalmaysay inay hesho goolal kale qaybta hore, waxaana fursado dahabi ah ka lumiyey Oxlade-Chamberlain iyo Van Dijk. Brentford ayaa 45kii daqiiqadood ee u horreeyey waxay heshay hal ufrsad oo kaliya oo uu Janelt ku tijaabiyey goolhaye Alisson.
Qaybtii labaad ayay Brentford ku bilaabatay si dardar ah. Norgaard ayaa kubbad ay isku dhiibeenMbeumo, waxaana markii ay xerada ganaaxa ula dhowaadeen gantaal ku liishaamay goolka Mbeumo, hase yeeshee waxay garab mariyeen birta.
Fernandez ayaa kubbad halis ahayd ka joojiyey Roberto Firmino daqiiqaddii 67aad, hase yeeshee Oxlade-Chamberlain ayaa daqiiqaddii xigtay waxa uu Liverpool u saxeexay goolka labaad oo ahaa kubbad uu Robertson kasoo jabiyey dhinaca bidix, taas oo uu iskula tuuray madax awood badan.
Laacibka reer England ayaa dhaawac ku baxay waxyar kaddib markii uu dhaliyey goolka, waxaana laga saaray guud ahaan garoonka iyadoo si toos ah uu uga baxay waddada tagta qolka labbiska.
Minamino oo beddel kusoo galay ciyaarta ayaa Liverpool u dhaliyey goolka saddexaad, waxaana kubbad hadiyad ah siiyey Firmino oo goolka u hordhigay.
Daqiiqadihii ugu dambeeyey ayuu Curtis Jones ku dhowaaday inuu gool afraad u dhaliyo kooxdiisa isaga oo kubbad uu meel fog kaga toogtay uu goolhayaha Brentford si dhib badan ku qabtay.
Trent Alexader-Arnold ayaa xerada ganaaxa dhexdeeda ka helay kubbad aanay cidina cidhiidhi ku haynin, taas oo uu ku qabtay darbo xoogan hase yeeshee goolka ayay hormartay.
Guushan ayay Liverpool ku yeelatay 45 dhibcood, waxaanay laba dhibcood dhaaftay Chelsea oo labaad u dhaadhacday, halka Manchester City oo hoggaanka ku haysa 56 dhibcood ay ka dambeeyaan 11 dhibcood, laakiin Liverpool waxay haysataa ciyaar baaqi ah oo haddii ay guuleystaan ay ugu sii dhowaan karaan Man City.